ငှက်လေး ကြိုးစားရှာဖွေ ထားသော စာစုများ: မျက်နှာသစ်ကြသူတိုင်းအတွက်
ဤနေရာသည် ဗုဒ္ဓ္စမြတ်စွာဘုရား၏ မေတ္တာရိပ်အောက်တွေ တည်ရှိပါသောကြောင့် ရောက်လာသူအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံကျပါစေ.....
လာရောက်ကြည့်ရှူအားပေးကျသော သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကျပါစေခင်ဗျာ
ငှက်လေး ကြိုးစားရှာဖွေ ထားသော စာစုများ
ငှက်လေး | 3:54 PM | ဗဟုသုတ
မင်္ဂလာပါနော်.. ခု ပြောပြမှာက မျက်နှာကို ဘာမှမလိမ်းခင် အဆင့်ဆင့် သန့်စင်နည်းလေးပါ။ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့သူတွေမှာ မျက်နှာမှာ အညစ်အကြေးတွေ အများကြီး ကပ်ညှိနေနိုင်တယ်နော်။ အဲဒီတော့ မျက်နှာကို သေသေချာချာသန့်စင်ပေးဖို့ လိုတယ်လေ။ မျက်နှာသစ်တာပဲ အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ပြောနေတယ်လို့ အတွေးမစောလိုက်ပါနဲ့ဦးနော်..။ လှပကျန်းမာပြီး ကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့ မျက်နှာလေးကို အမြဲပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မျက်နှာသစ်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကို မဖြစ်မနေနဲ့ သေသေချာချာ လုပ်ကြရမှာပါ။ မိတ်ကပ်လိမ်းခြင်း၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း၊ ဆေးလိမ်းခြင်း စတာတွေကို မျက်နှာသစ်ပြီးမှ လုပ်နိုင်မှာလေ။ မျက်နှာသစ်ရင်းနဲ့ အရမ်းနူးညံ့တဲ့ မျက်နှာအရေပြားကို မထိခိုက်စေဖို့လည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းသိပေမယ့် ဂရုမစိုက်မိတာလေးတွေကို သတိပေးချင်တာပါ။
- ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက တစ်နေ့ကို ပုံမှန်နှစ်ကြိမ် မျက်နှာကို သန့်စင်ပေးဖို့ပါ။
- ဖုန်မှုန့်တွေနဲ့ အထိအတွေ့နဲတဲ့သူဆိုရင် ၂ ကြိမ်က လုံလောက် ပါတယ်။
- အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေကတော့ ၃ - ၄ ကြိမ်သစ်နိုင်ပါတယ်။
- ဒါပေမယ့် မျက်နှာသစ်လွန်းရင်လည်း မကောင်းတာမို့ ၂ ကြိမ်ကို မျက်နှာသစ်ဆေးနဲ့ သစ်ပြီး နောက်ထပ်သစ်ချင်သေးရင် ရေနဲ့ပဲသစ်တာ အကောင်းဆုံးပဲနော်။
- မျက်နှာသန့်စင်ဆေး ရွေးချယ်တာကတော့ အရေးကြီးဆုံးပဲနော်။
- အကောင်းဆုံး မျက်နှာသန့်စင်ဆေးကတော့ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး မျက်နှာသန့်စင်ဆေးပါ။
- ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာအသားအရေဟာ ဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဆိုတာ အတိအကျသိရမယ်နော်။
- ခြောက်သွေ့တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်ဆိုရင် မျက်နှာကို အာဟာရဓာတ်နဲ့ အစိုဓာတ် ပြည့်ဝစွာပေးနိုင်တဲ့ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးကို ရွေးရပါမယ်။
- အဆီပြန်တတ်တဲ့ သူတွေကတော့ အဆီထုတ်လုပ်မှုကို ထိန်းပေးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးကို ရွေးနော်။
- ကဲ.. အဲဒီတော့ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးလေးဝယ်ဖို့ကို ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်း အကုန်လိုက်ဖတ်ရမှာလား?? အဲဒီလောက်လည်း အလုပ်ရှုပ်ခံစရာ မလိုပါဘူး။ အလွယ်ဆုံးက သင့်ရဲ့အသားအရေအမျိုးအစားကို အရောင်းကောင်တာက Sale Girl ကို ပြောပြလိုက်ရုံပါပဲ။ အတိအကျတော့ဖြစ်ရမယ်နော်။
- မျက်နှာကို မသန့်စင်ခင် လက်ကို အရင်ဆုံး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင် ဆေးဖို့လည်း မမေ့နဲ့နော်။
- မျက်နှာသစ်ရင်တော့ ရေနွေးနွေးလေးက အကောင်းဆုံးနော်။
- ရေပူတွေက မျက်နှာကို ခြောက်သွေ့စေတယ်လေ။
- ရေအေးကျပြန်တော့ အညစ်အကြေးတွေကို ကောင်းကောင်း မဖယ်ရှားပေးနိုင်ဘူးတဲ့။
ကဲ.. မျက်နှာသစ်ရအောင်နော်။ ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းကို ဆေးလိုက်ပါ။OK ! ပြီးရင် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးလေးကို လိမ်းရအောင်။
Don't Apply Facial Foam Directly
- မျက်နှာသန့်စင်ဆေးကို မျက်နှာပေါ် တိုက်ရိုက်မတင်လိုက်ပါနဲ့။
- ချွေးပေါက်တွေပိတ်ပြီး ၀က်ခြံတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
- ဒါကြောင့် မျက်နှာသန့်စင်ဆေးကို လက်ဝါးပေါ်အရင်တင်ပြီး အမြှပ်ထွက်လာအောင်ပွတ်ပြီးမှ မျက်နှာပေါ်တင်ပါ။
- ပြီးတော့ လက်ချောင်းထိပ်ကလေးတွေကို သုံးပြီး မျက်နှာပေါ်မှာ စက်ဝိုင်းပုံ ညင်ညင်သာသာလေး နှိပ်နယ်ပေးပါ။
- မျက်နှာကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း မပွတ်လိုက်နဲ့နော်။
- အဲဒီလိုလုပ်ရင် မျက်နှာအရေပြား ပျက်စီးနိုင်တယ်လေ။
- ပြီးတော့ မျက်နှာသစ်ဆေးက အဆီမပြန်ခြင်း၊ အသားဖြူခြင်းစတဲ့ အကျိုးတွေကို သေချာရနိုင်ဖို့ မျက်နှာသစ်ဆေးမှာပါတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ သင့်မျက်နှာပေါ်မှာ သေချာအလုပ်လုပ်ပြီး အစွမ်းပြနိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးရမယ်နော်။
- ၂ မိနစ် ၃ မိနစ်လောက် မျက်နှာပေါ်မှာထားပြီး နှိပ်နယ်ပေးရင်ကို ရပါတယ်နော်။
- ပြီးရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ မျက်နှာဆေးပါ။
- လည်ပင်းနဲ့ဆံစပ်နားတွေကိုလည်း စင်ကြယ်အောင် ဆေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။
- ကျန်ခဲ့တဲ့ မျက်နှာသန့်စင်ဆေးတွေဟာ ချွေးပေါက်တွေကို ပိတ်စေနိုင်တယ်လေ။
- ဒါကြောင့် ရေများများနဲ့ သေသေချာချာလေး မျက်နှာသစ်ရမယ်နော်။
Clean and Soft Towel
- မျက်နှာသုတ်ပုဝါကလည်း နူးညံ့ရပါမယ်။
- အရမ်းနူးညံ့တဲ့ မျက်နှာအရေပြားလေးကို ထိခိုက်မှုမရှိစေနိုင်ဖို့ပေါ့။
- ပြီးတော့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို သန့်ရှင်းအောင်ထားပါ။
- မသန့်ရှင်းတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြောင့် အရေပြားကို ပိုးဝင်နိုင်လို့ပါပဲ။
- မျက်နှာသစ်ပြီးရင် မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ ဖွဖွလေးဖိပြီး ညင်ညင်သာသာလေး သုတ်နော်။
- ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကြီး ပွတ်ဆွဲပြီးသုတ်ရင် နူးညံ့တဲ့ မျက်နှာအရေပြားလေးကို ထိခိုက်သွားမှာပေါ့။
- ပြီးရင် ရေဓာတ်ကို အခြေခံထားတဲ့ Alcohol Free Toner ကို သုံးပေးပါ။
- Alpha hydroxy acids ပါတဲ့ Toner ကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။
- သင့်ရဲ့ အသားအရေကို ချောမွတ် တင်းရင်းစေပြီး ချွေးပေါက်လေးတွေလည်း ကျဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
- နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်လို့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ ရေဓာတ်နဲ့ သဘာဝအဆီတွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ သင့်အသားအရေနဲ့ သင့်တော်မယ့် Moisturizer ကို လိမ်းလိုက်ပါ။
- မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း Moisturizer လိမ်းရမှာမို့ Chemical ပါဝင်မှု အနည်းဆုံး Moisturizer ကို ရွေးချယ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
- အစိုဓာတ်ကို သေချာပြန်ဖြည့်ဖို့ လိုနေပြီဆိုရင်တော့ ဗီတာမင်အီး (သို့) ရှားစောင်းလက်ပတ်ဆီကို မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း လိမ်းပေးပါ။ အားလုံး OK သွားလိမ့်မယ်။
ကဲ.. ဒါဆိုရင်တော့ သင်တို့ရဲ့ မျက်နှာသန့်စင်ခြင်းဟာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။သင့်ရဲ့ မျက်နှာလေးဟာလည်း မိတ်ကပ်လိမ်းဖို့၊ အပြင်ကိုသွားဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ် !!!ပိုပြီး လှပလန်းဆန်းတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ဖို့ ဒီနေ့ပဲ စလုပ်ကြည့်လိုက်နော်။
Posted by ငှက်လေး at 3:54 PM
Chat with ငှက်လေး
မင်္ဂလာပါနော်.. ခု ပြောပြမှာက မျက်နှာကို ဘာမှမလိမ်းခင် အဆင့်ဆင့် သန့်စင်နည်းလေးပါ။ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားသွားလာနေရတဲ့သူတွေမှာ မျက်နှာမှာ အညစ်အကြေ...
ချစ်သူနဲ့ အမြဲအဆင်ပြေနိုင်ဖို့သိသင့်တဲ့ အချက်များ
၁. အကယ်၍ သင်ဟာ သင့်ချစ်သူကို တကယ်ချစ်မိပြီဆိုရင် အရာရာကို ပေးဆပ်ရပါတော့မယ်.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဟာမိန်းကလေးဆိုရင် ချစ်သူတောင်းဆိုတိုင်းမလိုက်လျေ...
ဒီတခါ ကျနော် ပြောပြမယ့် ဇာတ်လမ်းက ကျနော် ၇- တန်း၊ ၈- တန်း ကျောင်းသားဘ၀မှာ တွေ့ကြုံဖူးတဲ့ တရုတ်တစ္ဆေပါ၊ တစ္ဆေ အကြောင်း မပြောခင် မြစ်ဆုံဆည်အကြေ...
(2011-2012) 10တန်း မေးခွန်းလွှာ
( ၁ ) မှား ၊ မှန် ရွေးပါ ။ ( ၁၀ ) မှတ် ...
ယောက်ျားလေး နဲ. မိန်းကလေး ကွာခြားချက်
၁) မိန်းကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ ယောက်ျားလေးထက် သေး တယ် ဆိုသော်ငြားလည်း မိန်းကလေးတွေရဲ့ မှတ်ဥာဏ်က ယောက်ျား...
အင်တာနက် ကဖီးတွေမှာ သွားသုံးတဲ့အခါ အထူးသတိထားရမယ့် အရေးကြီး အချက်တစ်ချက် ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကိုယ်သုံးမယ့် KeyBoard ကြိုးနဲ့ ကွန်ပျူတာ Syst...
.....ဆရာမ နဲ့ သူ့တပည့်များ..... ဟာသလေးပါ:P
ဆရာမ မရှိတော့ ပွတ်လောရိုက်နေကြ၏။ မကြာခင်မှာတစ်ကျောင်းလုံးကကြောက်သော မျက်နှာထားတင်းတင်း ဆရာမ အတန်းထဲဝင်လာ၏။ မီးကိုရေနဲ့ ငြိမ်းလိုက်သလို ချက...
သူတို့ မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တာ အခုဆို နှစ်နှစ်ကျော်ပါပြီ။ ကောင်လေးက စာပေပိုင်းမှာ အားသန်တော့ နက်ပေါ်မှာ စာတွေ ရေးပြီး တင်လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့စာကို...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဂန္တ၀င်စံတင်မည့် မိန့်ခွန်းစကားများ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဂန္တ၀င်စံတင်မည့်မိန့်ခွန်းစကားများ ၁။ လွတ်လပ်ရေးနှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ကြ။ အင်အားမရှိဘဲနဲံ စာရွက်...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဂန္တ၀င်စံတင်မည့် မိန့်ခွန်းစက...
ကျွန်တော်တို့၏ ပထမဆုံး အလုပ်တွင် ရှောင်လွှဲရမည့် အမ...
အသက်ရှင် နေထိုင်မှု ၁၀ ချက်.....
အပျံသင်စ ငှက်ကလေး၏ အိမ်မက်
forex webtrader, SWISS CASINO, Online Casino, Casino De Juego, JUEGOS DE CASINO
Mini robot Wars ဆော့ချင်သူများအတွက်
အပျင်းပြေကွန်ပြူတာပေါ် အရုပ်လေးတွေတင်ချင်သူများအတွက် software လေးတွေ
ငှက်လေး facebook ပါ
သိချင်တဲ့နေရာလေးကို mouse လေးထောက်ပီကြည့်လိုရပါတယ်နော်